Roberto Tinoka : Mpampiasa diploma sandoka -
AccueilRaharaham-pirenenaRoberto Tinoka : Mpampiasa diploma sandoka
07/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Ny didim-pitsarana laharana 03-C tamin’ny 17 Febroary 2015, Tribonaly Ambaratonga Voalohany miady amin’ny Kolikoly, antontan-taratasin’ady laharana 56/RP/14/CPCA, dia nanameloka an’i Raharoarilala Tinoka Roberto Michael, sazy mihatona herintaona an-tranomaizina noho ny fampiasana diploma sandoka avy amin’ny “centre National de Télé-enseignement de Madagascar” ny taona 2012-2013, heloka sazian’ny andininy faha-147 amin’ny fehezan-dalàna famaizana.
Tsy nijanona tamin’izany fanaovana diploma sandoka izany anefa ity solombavambahoaka MAPAR ity fa mbola nampiasa izany nandritra ny fisoratany anarana hiditra tao amin’ny CEDS ny faha-30 aogositra 2012, heloka sazian’ny andininy faha-148 amin’ny fehezan-dalàna famaizana. Mbola nampiasain’ity depiote ity tamin’ny antontan-taratasy hidirana ao amin’ny ENAM indray koa anefa io diploma sandoka io ny faha-7 desambra 2011. Nosazian’ny Fitsarana handoa ny lany rehetra ihany koa ny tenany tamin’izao raharaham-pitsarana izao.
Isan’ireo solombavambahoaka nitarika ireny hetsika nitory ireo depiote nandany ilay volavolan-dalàna mikasika ny fifidianana teny amin’ny Bianco i Roberto Tinoka, ary lohan’ny mpitarika ny fanenjehana ny fitondrana ho mpanao kolikoly tetsy amin’ny lapan’ny tanàna. Tsy arakaraka ny fisehoana ivelany tokoa ireo mitonona ho mpanao politika sasany eto amintsika. Ny tenany aloha izao no efa nanana raharaha teny anivon’ny Bianco noho ny fampiasana diploma sandoka, ary nosazian’ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany miady amin’ny Kolikoly, sazy mihantona herintaona an-tranomaizina.
Izany no lasa solombavambahoaka eto amintsika, olona mpampiasa hosoka no miseho ho mpanome lesona eto amin’ity tanindrazana iombonana ity. Nandritra ny fitondrana Tetezamita no nanaovany izao heloka izao, manaporofo indray fa nanjaka tokoa ny fandikan-dalàna sy ny halatra ary ny hosoka nandritra iny fitondran’ny mpanongam-panjakana iny. Izy ireo anefa ankehitriny no mitady hiverina eo amin’ny fitondrana, ary milaza ho manana vahaolana ho an’ny firenena!!!